नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव : सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव : सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु
on: २८ श्रावण २०७५, सोमबार १२:१५ अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव : सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा शुरू भएको नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव दुई देशबीचको साहित्यिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध सेतु बन्न सक्ने सहभागी साहित्यअनुरागीहरूले बताएका छन् । आइतवारदेखि शुरू भएको महोत्सवको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल र भारतका २ सय ५० साहित्यकारहरूको सहभागिता रहेको महोत्सव २ दिनसम्म चल्नेछ ।
वरिष्ठ साहित्यकार डा. ध्रुवचन्द्र गौतमले वीरगञ्जमा भएको साहित्यिक जमघट अत्यन्तै खुशीको विषय भएको बताए । नेपाल र भारतका साहित्यकारको सहभागिता रहेको यो महोत्सव आपसी सद्भाव र सहकार्य अभिवृद्धिमा कोशेढुङ्गा सावित हुने उनले बताए । गौतमले भने, ‘वीरगञ्जमा नयाँ साहित्यकारहरू उदाउनु र यस्ता साहित्यिक उत्सव हुनु निकै सुखद कुरा हो ।’
भारत हरिद्वारका साहित्यकार डा. योगेन्द्रनाथ शर्माले साहित्य महोत्सवले भाषा, संस्कृति, समाजसेवा, राष्ट्रियता र धर्मको पञ्चामृत निर्माण गरेको भन्दै यस्ता कार्यको निरन्तरतामा जोड दिए । कार्यपत्र प्रस्तोता महेश पौड्यालले नेपाल र भारतको साहित्यमा पश्चिमा साहित्यको नकारात्मक प्रभाव हावी भएको बताए ।
पौडेलले नेपाल र भारतका साहित्यकारहरू साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने बेला आएको बताए । ‘नेपाल र भारतका साहित्य क्षेत्रको साझा प्रयासमार्फत विश्वसँग संवाद गर्ने बाटाहरू खोज्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
साहित्य महोत्सवले नेपाल र भारतका साहित्यकारहरूको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र वीरगञ्ज क्षेत्रको साहित्यिक सम्भाव्यतालाई विस्तारित गर्ने विश्वास सर्जक निमेष निखिलको छ । उनले भने, ‘नेपाल र भारतको सामाजिक, सांस्कृतिक, कला र साहित्यलाई पनि अझ सुदृढ बनाउने छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
कतिपय साहित्यकार नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक सम्बन्धको तनावको असर न्यूनीकरणमा समेत साहित्यिक माहोल सहयोगी हुने बताएका छन् । साहित्यकार अनीता नेपाल भन्छिन्, ‘विगतमा दुई देशको राजनीतिक वातावरणमा केही असमझदारी देखियो । यसले सम्बन्धका अन्य आयामलाई पनि प्रभावित पा¥यो । यसरी बिग्रिएको विषयलाई साहित्यको माध्यमबाट ठीक ठाउँमा ल्याउन मद्दत पुग्छ ।’
भारत मेरठकी सर्जक डा. सरोजिनी तन्हा कुनै कारण राजनीतिक परिदृश्यमा केही उतारचढाव देखिए पनि माहोललाई स्वस्थ बनाएर राख्ने काममा साहित्यकारहरूले सघाउन सक्ने बताउँछिन् । उनले नेपाली साहित्य राम्रो भएर पनि यसबारेमा उपयुक्त जानकारीको अभाव भएको भन्दै महोत्सवले नेपालको साहित्यका बारेमा जानकार हुने मौका प्रदान गरेको बताइन् । यस्ता जमघटले हिन्दी भाषीलाई पनि नेपाली भाषाका बारेमा जानकार हुने अवसर प्राप्त हुने दाबी नेपाल गर्छिन् ।
कवि शान्तिप्रिय वन्दनाले दुई देशका साहित्यकर्मीहरूको यो सहभागिताले साहित्य, भाषा, संस्कृति र समाजका बारेमा जानकार हुने मौका मिल्ने बताइन् । साहित्यका स्रोत भनेकै समाज र संस्कृति भएको उनको धारणा छ । पत्रकार गिरीश गिरी महोत्सव शुरुआतमात्र भएकाले यसका आयामहरू अझ विस्तार भएर जानेमा आशावादी देखिन्छन् ।
भारत दिल्लीका राजेन्द्रसिंह अरोराले साहित्य महोत्सवले दुवै देशको साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘संस्कृति र रहनसहन आदानप्रदानले आत्मीयता अभिवृद्धि हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनु पर्दछ ।’
लक्ष्मी साहित्य समाज पर्साका अध्यक्ष महेशचन्द्र गौतम साहित्यिक माहोलले साहित्यको समृद्धिमा बल पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘नेपाल र भारतको भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, रीतिथितिमा धेरै समानता भएकाले पनि साहित्यको विषयवस्तु पनि करीब समान छन् । यस्तो परिवेशमा हुने साहित्यकारहरूको जमघटले एकअर्काको साहित्य र सामाजिक संरचनाबारे जान्ने अवसर मिल्छ,’ गौतमको भनाइ छ ।
भारतको मध्यप्रदेशबाट आएका शिवेन्द्र शर्मा भारत र नेपाल अलग देश भएर पनि भाषा र संस्कृति एकैजस्तो भएको बताउँछन् । ‘हामी सांस्कृतिक र साहित्यिक दृष्टिले पनि आपसमा बाँधिएका छौं । साहित्य र संस्कृतिको आदानप्रदानमा यो महोत्सव सहयोगी हुनेमा विश्वस्त छु,’ उनको भनाइ छ । भारतकै गाजियावादका डा. राजीवकुमार पाण्डे पनि साहित्य महोत्सवले दुवै देशका सर्जकहरूलाई जोड्ने काम गरेको बताउँछन् ।
नेपाल–भारत साहित्य महोत्सवको अवसरमा साहित्यको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने सर्जकहरूलाई सम्मान गरिएको छ । आख्यानकार डा. ध्रुवचन्द्र गौतमलाई ‘विशिष्ट साधक सम्मान’ प्रदान गरिएको छ । भारतका डा. योगेन्द्रनाथ शर्मालाई पनि सो सम्मान दिइएको छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले साहित्यकारलाई सम्मान प्रदान गरे ।
जसराज किराँतीलाई ‘काव्य साधना सम्मान’ र रमेश गोर्खालीलाई ‘गैरआख्यान सम्मान’ दिइएको थियो । कवि श्रेष्ठ पिया पत्थरलाई ‘गीत गजल साधना सम्मान’ दिइएको छ । सोही समारोहमा महोत्सव आयोजकले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल–भारत साहित्ययात्रा–२०१८’ विमोचित गरिएको छ । सो स्मारिकामा नेपाली र हिन्दी भाषामा साहित्य सृजनाहरू प्रकाशित छन् । मुख्यमन्त्री राउतले डा. श्वेता दिप्तीको भारतीय एवम् पाश्चात्य काव्ययात्राको समेत लोकार्पण गरे ।